နာတာရှည် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့် နေထိုင်နည်း (၁၀) ချက် - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » အရိုးနဲ့ကြွက်သားကျန်းမာရေး » နာတာရှည် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်မယ့် နေထိုင်နည်း (၁၀) ချက်
ခြေထောက် သို့မဟုတ်ခြေကျင်းဝတ်မှာရောင်နေလား၊ ခြေထောက်တွေနာကျင်ပြီး လေးလံနေလား၊ မတ်တတ်ရပ်လိုက်ရင် ပိုနာကျင်နေလား၊ တံကောက်ကွေးနားက သွေးပြန်ကြောတွေ ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီးထင်းနေလား၊အရောင်တွေပြောင်းနေလား ။ ဒါဆိုသွေးပြန်ကြောမှာပြဿနာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပါပြီ။ လူက အချိန်ကြာကြာထိုင်လို့မရ၊ ကြာကြာရပ်လို့မရအောင် နာကျင်ရတာ၊တံကောက်ကွေးမှာ တင်းတင်းကြီးဖြစ်နေတာ၊ သွေးပြန်ကြောတွေနားတဝိုက် ယားယံတဲ့ ပူတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတာ၊ အရေပြားမှာပါအရောင်ပြောင်းလာပြီး အနာတွေဖြစ်လာတာတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
သွေးပြန်ကြောရောဂါဆိုတာ ခန္ဓါကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးပြန်ကြောတွေကို ထိခိုက်နေတဲ့ရောဂါတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာသွေးကြောထုံးရောဂါလို့ခေါ်ကြတဲ့ varicose veins ၊ ပင့်ကူသွေးပြန်ကြောလို့ခေါ်ကြတဲ့ spider veins ၊ နာတာရှည် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောရောဂါ venous insufficiency စတာတွေပါဝင်ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ ကြည့်ရဆိုးတဲ့ သွေးကြောဖောင်းတာတွေမြင်နေရရုံဆိုပေမယ့် သွေးပြန်ကြောရောဂါတွေကပြင်းထန်လာပြီဆိုရင် နာကျင်မှု၊ရောင်ရမ်းမှုတွေပိုဆိုးလာပြီးသွေးယိုတာ၊ အနာတွေဖြစ်လာတာ၊သွေးခဲပိတ်ဆို့တာအထိဖြစ်လာနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
နာတာရှည် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောရောဂါအဖြစ်များစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတချို့
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် သို့မဟုတ်သွေးဆုံးချိန်လိုမျိုးဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲဖြစ်တာတွေ၊အသက်အရွယ်၊ အထိုင်များတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံ၊ မိသားစုမျိုးရိုး၊ ကိုယ်အလေးချိန်များနေတာ နဲ့ခြေထောက်ထိခိုက်ဖူးတာ၊ ခွဲစိတ်ဖူးတာတွေကနာတာရှည် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ခြေထောက်ချိတ်မထိုင်ဖို့၊ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မစီးဖို့ အကြံပေးတတ်ကြတာလည်းမှန်ပါတယ်။ ဒီလိုနေထိုင်တဲ့အခါသွေးပြန်ကြောတွေအပေါ် ဖိအားပိုများလာစေပြီးသွေးလည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
အသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်တာရယ်၊ မိသားစုမျိုးရိုးကြောင့်ရယ်ကလွဲပြီး သွေးပြန်ကြောရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်အနေနဲ့တတ်နိုင်တာကနေထိုင်မှုပုံစံမှာ ဂရုစိုက်ဆင်ခြင်ဖို့ပါပဲ။သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး ရောဂါကင်းရှင်းကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါဦး။
(၁) အချိန်အကြာကြီးမထိုင်နဲ့၊ မရပ်နေနဲ့
လှုပ်ရှားမှုလေးရှိမှသွေးပြန်ကြောတွေကခြေထောက်ကသွေးကို နှလုံးဆီပြန်ပို့လွှတ်နိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုနိုင်မှာပါ။ အနေအထားပုံစံတစ်ခုတည်းမှာ အကြာကြီးမလှုပ်မရှားငြိမ်နေမယ်ဆိုသွေးပြန်ကြောတွေအပေါ် ဖိအားသက်ရောက်စေပြီးခြေကျင်းဝတ်၊ခြေထောက်နဲ့ တံကောက်ကွေးနေရာတွေမှာရောင်ရမ်း၊နာကျင်ရပါလိမ့်မယ်။
အထိုင်များတဲ့အလုပ်လုပ်ရသူတွေအနေနဲ့ ခဏလောက်ဖြစ်ဖြစ် ထပြီးလမ်းလျှောက်ပေးတာ၊ခြေထောက်ကိုဆန့်တန်းလှုပ်ရှားပေးတာ၊ ထိုင်ခုံမှာပဲ စက်ဘီးနင်းသလိုခြေထောက်လှုပ်ရှားပေးတာမျိုးကသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေပါတယ်။
သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းစေဖို့တစ်နေ့ သုံးကြိမ်လောက်တော့ ခြေထောက်ကို ၁၅မိနစ်စီမြင့်အောင်ထားပေးပါ။ ဥပမာ – ခြေထောက်အောက်မှာခေါင်းအုံးသုံးလုံးလောက်ဆင့်ပြီး ပက်လက်လှဲအိပ်နေတာမျိုး။
လမ်းလျှောက်တာ၊ စက်ဘီးစီးတာ၊ တင်းနစ်ကစားတာ တို့လို သိပ်မပြင်းထန်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမျိုး တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး မိနစ် ၁၅၀လောက် လုပ်ပေးပါ။
ရေဓါတ်ပြည့်ဝတဲ့ခန္ဓါကိုယ်ဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိကကျပါတယ်။ရေဓါတ်ပြည့်ဝနေတဲ့အခါသွေးကကျဲလာပြီး လည်ပတ်မှုပိုကောင်းပါတယ်။သွေးကပျစ်ခဲနေတယ်ဆိုတာ ခန္ဓါကိုယ်မှာရေဓါတ်နည်းနေတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သွေးပြန်ကြောတွေမှာ သွေးခဲပိတ်ဆို့မှုဖြစ်လာနိုင်ခြေပိုများစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်နေ့ကိုရေ ၈ ခွက်သောက်ပေးဖို့က နှလုံးကျန်းမာရေး၊သွေးပြန်ကြောကျန်းမာရေးအတွက် အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှန်မှန်လုပ်ပြီး ကျန်းမာအောင်စားပါ။ ဝနေပြီဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့လိုက်မှသာသွေးပြန်ကြောတွေကို ဖိအားသက်ရောက်မှုသက်သာစေမှာပါ။ စားတဲ့အခါလည်း အငန်များတာစားမိရင်ရောင်ရမ်းမှုပိုဆိုးလာနိုင်တယ်ဆိုတာလေး သတိထားသင့်ပါတယ်။
(၆) အဝတ်အစား ကျပ်ကျပ်တွေမဝတ်ပါနဲ့
ခါး၊ပေါင်ရင်းနဲ့ခြေထောက်မှာ သိပ်ကျပ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေကသွေးကြောထုံးခြင်းလိုမျိုး သွေးပြန်ကြောရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။သွေးလည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် အရမ်းမကျပ်တာတွေပဲဝတ်ပါ။
(၇) စကားပြောရင်း လမ်းလျှောက်ပါ
ကိုယ်က အထိုင်များနေပေမယ့် ဖုန်းထပြောတဲ့အခါ လမ်းလျှောက်ရင်းပြောတာ၊ အနီးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကို စကားလှမ်းပြောတဲ့အခါ သူ့ဆီထပြီး သွားပြောလိုက်တာက လမ်းလျှောက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေပါတယ်။ ကိုယ်ကလှုပ်ရှားလိုက်တာ၊ ကြွက်သားတွေသုံးလိုက်တာနဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းလာပြီးသွေးပြန်ကြောရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေလျော့နည်းစေပါလိမ့်မယ်။
ခြေထောက်နှ်စ်ချောင်းကို ချိတ်ပြီးထိုင်တာက စတိုင်ကျပေမယ့်သွေးလည်ပတ်မှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒေါက်ဖိနပ်လေးနဲ့ ကြော့မော့တဲ့အလှကို ဖက်ရှင်ကျကျဝတ်စားချင်ကြပေမယ့်နေ့စဉ်ဘဝမှာ အမြဲတော့အဆင်မပြေလောက်ပါဘူး။နေ့တိုင်း တစ်လက်မခွဲရှိတဲ့ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်ကိုစီးပြီးသွားလာနေမယ်ဆိုရင် တံကောက်ကွေးကြွက်သားတွေကသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင် မကူညီနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရံဖန်ရံခါလောက်ပဲ စီးပါ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအများကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွှယ်နေတဲ့သွေးတိုးကသွေးပြန်ကြောထုံးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်လို့ သုတေသနတွေကလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းက နာတာရှည် ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောရောဂါကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဒီလိုဆင်ခြင်နေထိုင်မယ်ဆိုပေမယ့် တကယ်လို့များ လက္ခဏာတွေလည်းတွေ့နေရပြီး ကိုယ့်မှာ ဒီရောဂါတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်ရော။ မပူပါနဲ့။ အမြန်သက်သာစေမယ့် ကုသမှုတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ သွေးပြန်ကြောရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေပြီးသွေးပြန်ကြောရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ သောက်ဆေးတွေ သောက်တာမျိုးပေါ့။ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်သောက်တာထက် နားလည်တတ်ကျွမ်းသူနဲ့သေချာတိုင်ပင်ပြီးမှသောက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း နိုဝင်ဘာ 28, 2019
Accessed Date - Oct 2, 2018.
Accessed Date - Oct 3, 2018.
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, လိင်ပညာပေး, ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရ